”Waxaan nahay 10 milyan tabantaabana uma baahnin!” – Azerbaijan oo gobol kale ka qabsatay Armenia | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxaan nahay 10 milyan tabantaabana uma baahnin!” – Azerbaijan oo gobol kale...
”Waxaan nahay 10 milyan tabantaabana uma baahnin!” – Azerbaijan oo gobol kale ka qabsatay Armenia
(Baku) 05 Okt 2020 – Millateriga Azerbaijan ayaa xoreeyey gobolka Jabrayil oo ka tirsan Nagorno-Karabakh, iyagoo sidoo kale qabsaday tuulooyinka Böyük Mercanlı, Maralyan iyo Şeybey oo ay haysteen Ciidanka Armenia, sida uu sheegay MW Azerbaijan, Ilham Aliyev.
Dhanka kale, Armenia ayaa duqaymo aan kala sooc lahayn ka gaysatey magaalooyin ay ku jirto tan 2-aad ee ugu way dalkaasi Azerbaijan ee Ganja, oo ay ku nool yihiin nus milyan qof, sidoo kale Füzuli iyo Tartar iyo Jabrayil.
“Azerbaijan waxay burburin doontaa bartilmaameedyada ay Armenia kasoo rideyso madaafiicda iyo gantaalaha ay la dhacayso magaalooyinka Azerbaijan,” Hikmet Hajiyev oo la taliye u ah MW dalkaasi, isagoo sidoo kale diidey wararka sheegaya inuu Turkigu caawinayo.
“Waa jiraan jaalnimo istaraatiji ah waxaa sidoo kale jira xiriir walaalnimo oo u dhexeeya Turkey iyo Azerbaijan – balse Turkey dagaalkan qayb 3-aad kama aha,” ayuu ku adkaystay Hajiyev.
”Azerbaijan uma baahna dhinac 3-aad oo dagaalka ka qayb gala. Waxaan leennahay ciidan xooggan iyo khayraad naga badan. Waxaan nahay 10 milyan, kayd fiicanna waan haysannaa.” ayuu ku faanay.
Armenia ayaa iyadu tiro ahaan gaaraysa wax ka yar 3 milyan waana 2.965 milyan oo qof.
Dagaalka oo haatan socda maalintii 9-aad oo xiriir ah ayay Armenia dorraad ogolaatay xabbad joojin ay horay u diiddanayd, waloow ay taas iminka diiddey Azerbaijan.
Previous article”Ixtiraama heshiiska!” – DP World oo diiddey in xafaarad laga soo dirayo Jabuuti ay ka shaqayso Dekedda Boosaaso & in la dhamaystiro intaba
Next article”Somalia ka bixi mayno xitaa haddii ay AMISOM baxdo!” – Kenya oo kursiga Golaha Amaanka u adeegsan doonta ajende lid ku ah Somalia & SNA oo ay isha ku hayso
(Paris) 17 Sebt 2021 - Camaaliqada shamiitada soo saarta ee Faransiiska ah ee Lafarge ayaa la sheegay inay xiriir aan caadi ahayn la lahayd...